सोभियत फौजले अफगानिस्तान छाड्दा पनि तालिवान अमेरिकाले छाड्दा पनि तालिवान - PLA Khabar
सोभियत फौजले अफगानिस्तान छाड्दा पनि तालिवान अमेरिकाले छाड्दा पनि तालिवान
2021-08-01 2021-08-01 plakhabar
एजेन्सी – अफगानिस्तानको आधा भन्दा बढी भू–भागमा तालिवानको नियन्त्रण कायम भइसकेको छ । मुख्य शहरहरुमा नियन्त्रणका लागि बढिरहेका तालिवानले अफगानिस्तानको शासनसत्ता कब्जा गर्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ । यो घटना अमेरिकी सेना अफगानिस्तान छाडेर गएलगत्तै विकास भएको हो ।
अफगानिस्तानमा अमेरिकी सेना नजिक भएर काम गरेकाहरु असुरक्षित भएका छन् । उनीहरु धमाधम अमेरिका पुग्न थालेका छन् । विशेषगरी भाषा उल्था गर्न राखिएकाहरु अमेरिका पलायन हुन थालेका छन् । विगतमा सोभियत संघका फौजले यसरी नै अफगानिस्तान छाड्दा उनीहरु निकटहरु असुरक्षित भएका थिए । धेरैजना मारिएका थिए ।
शितयुद्ध ताका तालिवानले पाकिस्तानमार्फत् अमेरिकाकै भित्री सहयोगमा रुसी सेनालाई अफगानिस्तानबाट फिर्ता हुन वाध्यकारी अवस्था निर्माण गर्न सकेको थियो । रुसको बलियो प्रभाव रहेको अफगानिस्तानमा त्यतिबेला रुसमुखी राष्ट्रपति मोहम्मन नाजिबुल्ला बलिया थिए । सन् १९८६ देखि १९९२ सम्म अफगानिस्तानमा शासन गरेका नाजिबुल्ला तालिवानबाट मारिएका थिए । तालिवानले अफगानिस्तानमा नियन्त्रण कायम गरेपछि काबुलस्थित संयुक्तराष्ट्रसंघको मुख्यालयमा शरण लिएका उनलाई त्यहाँबाट निकालेर निर्ममतापूर्वक हत्या गरी झुण्ड्याइएको थियो ।
नाजिबुल्लाको शासनकालमा तत्कालीन सोभियत संघले सेना विस्तारै फिर्ता लगेको थियो । उनले त्यहाँको गृहयुद्ध अन्त गर्न खोजेका थिए । तर, सोभियत संघले सेना फिर्ता लिएर नाजिबुल्लालाई साथ दिएपनि उनको सत्ता टिक्न सकेन । शितयुद्धताका सोभियत संघ विभाजित भयो । नाजिबुल्ला कमजोर भए । उनी राजीनामा दिन वाध्य भए । त्यसको असर अफगानिस्तानमा अमेरिकालगायत पश्चिमाहरुको प्रभाव बलियो भयो ।
तालिवान काबुल पसे । २६ सेम्टेम्बर सन् १९९६ मा नाजिबुल्ला र उनका भाई साहपुरको निर्ममतापूर्वक हत्या गरी ट्राफिक लाइटको पोलमा झुण्ड्याइयो । नाजिबुल्लाको हत्यामा अमेरिकाको सहयोग पाएको पाकिस्तानको भूमिकाको विषय उठिरह्यो । सोभियत संघको साथ र भारतसँग नजिकको सम्बन्ध रहेका नाजिबुल्लाको पतन हुँदै गर्दा पाकिस्तानको साथ पाएको तालिवान सत्तामा पुगेको थियो । त्यतिबेला अमेरिकाको पाकिस्तानसँग सुमधुर सम्बन्ध थियो । अमेरिकाले पाकिस्तानको माध्यमले तालिवानलाई भित्री साथ दिएर सोभियत संघलाई अफगानिस्तानमा कमजोर पार्न सकेको थियो ।
जसरी अफगानिस्तानको गृहयुद्धको बहानामा तत्कालीन सोभियत संघको फौज त्यहाँ पस्यो त्यसरी नै अमेरिकासहित नेटोका सौनिक प्रवेश गरे । तालिवानको पतनसँगै नयाँ परिस्थिति विकास भयो । अमेरिकी साथमा सरकार चलिरह्यो । तर, विश्वको बदलिएको शक्ति सन्तुलनले अफगानिस्तानमा अमेरिकी प्रभाव कमजोर हुँदै गयो ।
पाकिस्तानको अवोटावादमा अल कायदा नेता ओसामा विन लादेन लुकेर बसेका थिए । त्यसमा पाकिस्तानको भूमिका रहेको खुल्दै गएको छ । तर, अमेरिकी सेनाले सन् २०११ मा पाकिस्तानभित्र सैन्य बल प्रयोग गरी लादेनलाई मारिदियो । त्यो घटनाले पाकिस्तानसँग अमेरिकाको सम्बन्ध चिसियो । अफगानिस्तानमा तालिवान शक्तिशाली बन्दै जानथाल्यो । पाकिस्तानले तालिवानलाई पछाडिबाट साथ दिएर बलियो बनाउँदै लग्यो । अर्कोतर्फ, पाकिस्तानले अमेरिकासँगको सम्बन्धबाट टाढा बनाएर चीनसँग निकटता बढायो । सैन्य सम्बन्ध चीनसँग बढाउँदै लग्यो ।
तालिवानको प्रभाव बढ्दै जाँदा गत हप्ता रोचक घटना विकास भयो । तालिवानी नेता मुल्ला अब्दुल घानी बाराडारको नेतृत्वको टोली पहिले रुस र त्यसपछि चीन पुग्यो । तालिवानले ती देशहरुबाट साथ र सहयोगको प्रयास गरेको सन्देशहरु प्रवाह भयो । चीन पुगेर विदेशमन्त्री वाङ यीसँग भेटवार्ता गरे । तालिवानका नेताले अफगानिस्तानको भूमि चीनविरोधी गतिविधिमा प्रयोग हुन नदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको ग्लोबल टाइम्सले लेखेको छ ।
तालिवानका प्रवक्ता सुहेल सहिनले दिस वीक इन एशियामा अन्तवार्ता दिदै चीनलाई अफगानिस्तानको मित्र भनेका छन् । चीनलाई त्यहाँ रहेका मुस्लिम पृथकतावादीलाई सहयोग नगर्ने प्रतिवद्धता समेत तालिवानले जनाए । सेहले अलकायदाको गतिविधिलाई रोक्न भूमिका खेल्ने समेत बताएका थिए ।
अफगानिस्तानमा तालिवानप्रति चीनको नरम व्यवहार र पछिल्ला उच्चस्तरीय भेटहरुले महत्वपूर्ण सन्देशहरु दिन सक्यो । अफगानिस्तानमा पनि रुस र चीनको प्रभाव बढेको देखियो । अमेरिका र पश्चिमा देशहरुको ठाउँ रुस र चीनले लिने संकेत थियो त्यो ।
रुस र चीनमा तालिवानी प्रतिनिधि पुगेपछि झन् बढी भूभागहरु कब्जा गर्दै गएका छन् । यी सबै घटनाहरु विश्वको शक्तिसन्तुलनमा बदलावको परिणाम हो । अमेरिका सर्वशक्तिमान बन्दा अफगानिस्तानमा उसको बलियो पकड बन्यो । अहिले उसलाई रुस र चीनले विश्वभर कडा चुनौती दिन थालेका छन् । परिणामस्वरुप तालिवानहरु अमेरिकाविरोधी बाह्य शक्तिको साथले फेरि अफगानिस्तानमा बलियो बन्दै गएका छन् । जसरी सोभियत संघको सेना फिर्ता भएपछि मुजाहिद्दीन हुँदै तालिवान सत्तामा आए । त्यसरी नै अमेरिकी सेना फिर्ता भएपछि तालिवान पुनः सत्ताको नजिक पुगेको छ । यी सबै घटनाका पछाडि शक्तिराष्ट्रहरुको बढ्दो टकराव र आफ्नो प्रभाव बनाइराख्ने रणनीतिको परिणाम हो ।
Posted in अन्तराष्ट्रिय, मुख्य समाचार, राजनीतिTagged तालिवान
असोज १२ गते मंगलबारको तपाईको भाग्य
एमालेका सांसदलाई पदबाट राजीनामा दिन डा. भट्टराईको चुनौती
भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेका चुडामणि शर्मा ५० लाख धरौटीमा रिहा
इरानले अफगानिस्तानमा मानवीय सहायता सामग्री पठायो
एमसीसी संशोधन नगरी पारित गर्नुपर्ने परराष्ट्रमन्त्री डा. खड्काको भनाई
एक पाइलटको कुशलताले दुर्घटनाबाट जोगिएको बुद्ध एयर
१२८२ कोरोना संक्रमित थपिए, ७ जनाको मृत्यु
मन्त्रिपरिषद बैठक बस्दै, दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश के होला ?
संसद्मा प्रतिपक्षको आवाज सुनिनुपर्छः महेश बस्नेत